ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း
ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း သည် ဆန်းလွင် (အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ၏ ကျော်ကြားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်တွင် ဦးဆန်းလွင်သည် အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန် စသည့်ဘာသာများမှ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပုံကို ရေးသားတင်ပြထားသည်။ သူ၏ ဘဝအတွေ့အကြုံနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အတွေးအခေါ်၊ ဝါဒတို့ကိုလည်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ဦးဆန်းလွင်သည် သူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်မီ (၃၅) နှစ်ကာလပတ်လုံး ဘဝဒဿန၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူဝါဒတို့ကို လေ့လာခဲ့ပုံကို စာအုပ်တွင်
အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အသိပညာကို လိုလားသည် ဖြစ်အံ့၊ ဘဝသစ္စာကို ရှာလိုသည်ဖြစ်အံ့၊ ယထာဓမ္မကိုသာ မြင်လိုသည် ဖြစ်အံ့၊ ကမ္ဘာပေါ်၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသော အယူဝါဒ မျိုးစုံကို မွှေနှောက်လိုသည် ဖြစ်အံ့။ ထိုသူအား စင်ကြယ်သော အမြင်ကို ဖြစ်စေခြင်းငှါ ဖွင့်ထားသော စိတ်နှလုံး (open mind) ရှိအပ်၏။ ဖွင့်ထားသော စိတ်နှလုံးရှိသူတိုင်းအား ဤစာကို ဖတ်ရန် ဖိတ်ကြားပါသည်။
ယခင်က စာအုပ်ကို လေးတွဲခွဲ၍ ထုတ်ဝေခဲ့၏။ နောင်အခါ တစ်အုပ်တည်းအဖြစ် ပေါင်း၍ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ “ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ယုံကြည် ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း” သည် ဦးဆန်းလွင် ရေးခဲ့သည့် စာအုပ်များထဲတွင် အထူးထင်ရှားသည့်စာအုပ် ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ဆန်းလွင် (အရှင်အာဒိစ္စရံသီ). ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း. ၁၄၉၊ ၃၇ လမ်း၊ ရန်ကုန်။: ဘဝတက္ကသိုလ်စာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရတနာသုံးပါးကို_ယုံကြည်ကိုးကွယ်_ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း&oldid=527377" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၅:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။